Windows 10 vs Ubuntu: kurwira kubatana | Linux Vakapindwa muropa
Hondo yekutendeuka: Windows 10 vs Ubuntu
Microsoft iri pamberi pemutambo kana zvasvika pakubatana. Canonical yaive nepfungwa pakutanga, asi haana kukwanisa kusvika pakutanga, kunyangwe zvichizodaro. Windows 10 yaunza kusangana kunotarisirwa, kunyangwe pachine nzira refu yekufamba mune izvi. Asi danho rekutanga rasvika uye Windows 10 haina kusiyanisa pakati pePC, smartphone kana piritsi. Nekudaro, programmer inogona kugadzira software kamwe chete uye kuti inoshanda kune chero chikuva ne Windows 10.
Apple inoita kunge isina hukuru hukuru parizvino Mupfungwa iyi, uye kunyangwe munguva pfupi yapfuura iri runyerekupe nePad Pro ine mukana wekusarudza pakati peIOS neMac OS X yakaiswa, izvi hazvingabatanidzwe, asi nyore kuchinjika kweOS X kuchikuva cheARM. Zvakare, sekutaura kwangu, panguva ino hapana chepamutemo uye iwo anongova runyerekupe. Tichaona kuti izvi zvinopera sei ...
Ndiani kana nzira iyi yatanga ndeyeCanonical uye ivo vanoda kukunda muhondo, yeuka kuti chero munhu anoseka kwekupedzisira anoseka zvakanyanya. Isu tagara tichizivisa kutarisirwa uku kusangana pakati pedesktop nemamwe mafoni nhare muUbuntu. Zvino, kumwe kwekukanganisa kukuru kweUbuntu Runhare kushomeka kwesoftware kana ichienzaniswa neIOS uye Android, asi kana kusangana kukauya, izvi zvinogona kuchinja zvakanyanya.
Kubva pane zvatakaziva, BQ, kambani yeSpanish iyo yakapa mashoko akanaka kwazvo, sekutanga kwekutanga smartphone neBuntu Runhare yemusika, ichave iri pamusoro pekugadzira chishandiso chekutanga chinounza kubatana uku. BQ yakabatana neCanonical inogona kutiunzira kusangana muna Gumiguru. Ingadai iri yekutanga smartphone inokwanisa kuve PC nekungobatanidza iyo kune skrini.
Sezvandinotaura, BQ ichave inotarisira kugadzira iyo chigadzirwa chepamusoro-soro uye kuti zita rayo rinogona kunge riri BQ Ubuntu Pro. Zvakare, kusiyana neiyo Aquaris E4.5 uye iyo Aquarius E5 Iwo matemu eApple aka "zvishandiswazve" kugadzirisa Ubuntu kubva kufekitori. Asi BQ Ubuntu Pro ingangove hardware yakanyatsogadzirirwa Ubuntu.
Sekuona kwedu, ese maCanonical neMicrosoft vatora nzira dzakafanana mune izvi. Microsoft yakasarudza kugadzira yepuratifomu yepuratifomu yeApple yezvose zvishandiso uye, kune rimwe divi, yayo Continuum yefoni tekinoroji, ndiko kuti, iyo kugona kushandura nharembozha kuita PC kungoibatanidza kune skrini, kuishandura kuita yechinyakare Windows 10 yedesktop. Canonical inoda kuita chaizvo zvakafanana chinhu… kana chimwewo chinhu? Nekuti mazuva ano vakanyarara kwazvo ...
Kunyangwe Windows 10 iri kuzvigadzira kumirira kwenguva yakareba kupfuura zvaitarisirwa uye kuti Canonical inogona kusvika mumashure, mubvunzo hausi wekutanga anosvika, asi ndiani achave neakanakisa kusangana mumusika, nekuti iye anokunda aigona kushandura nharembozha yemusika. Uye zvirokwazvo, Canonical ikambani inofananidzwa neApple mune dzimwe nzira, ine yakanyanya kumberi-kufunga uye ramangwana chiratidzo.
Kune rimwe divi, kana Apple ine iOS neGoogle ine Android, pakati pemamwe mapuratifomu (Tizen, FIrefox OS,…) vasingaite chimwe chinhu chinoshamisa, vanogona kurasikirwa nemugove wemusika kana kusangana kweMicrosoft neCanonical kukasvika kuvanhu vazhinji. Mukupedzisa, kutaura izvozvo, mumaonero angu, Microsoft ine mari, asi Canonical ine izvo zvavanoshaya ... Unofungei?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Hondo yekutendeuka: Windows 10 vs Ubuntu
Ini kana iri yepamusoro-soro Smartfon uye pamusoro peiyo ndinoitenga zvechokwadi uye kana iine mbiri sim kunyangwe
Ya mico $ kazhinji inokunda, senge iyo kana kwete, zvikonzero?
1) Pseudo yako kusangana mune tekinoroji kunotanga kubuda. Asi, pakupedzisira, kune ruzhinji rwevanhu iko kusangana uye ndizvo zvichave izvo zvakakosha.
2) Inotova nemugove wakakura kwazvo mumakomputa akachengetedzwa, Ubuntu ichiri kure nekuva makwikwi ayo mune izvozvi (nzwisisa: chikamu chemusika).
3) Nezve mugove wemusika mumafoni efoni uye mahwendefa, ndinopokana zvikuru kuti vanhuwo zvavo - avo nenzira yepurogiramu havazive uye havana hanya zvakanyanya nezvekuti kana smartphone ichibatana pamwe nelaptop zvachose kana iwe unogona kuishandisa kutsiva imwe - inobata tarisiro yavo, ivo vacharamba vachishandisa Android uye io, ivo vanozoona iyo yekubatanidzwa seye geek kuda kuziva, senge pavanoona mhedzisiro ye compiz kana KDE, kana iwe ukavaudza kuti iwe unogona , gadzirisa iyo yemahara software kune kwavo kuda Kana paine chero chinhu, icho chinobata kutarisisa kwevamwe windo $ vashandisi.
Canonical yaigona kurwa, kuhwina imwe nyaya, dai yakanga yatungamira munguva imwe kana makore maviri apfuura, payakatanga nekubatanidzwa kwayo kwekushamisira kwakazopedzisira wave nyaya yemukomana uye mhumhi: «mhumhi iri kuuya, mhumhi iri kuuya. mhumhi ", kana canid inozivikanwa payakazosvika hapana munhu akamupa kukosha.
Chekupedzisira, iyo yakazara yekubatanidza chirongwa cheUbuntu, chakafanana neicho chemakore makumi masere ekuberekwa, chichava chizvarwa chekare.
Ndinodzokorora, tingave tichida kana kwete. :(
Canonical ndakazvinyadzisa pandakasiya gnome kuita UNIT, Ndini uye vazhinji vedu takarega kuishandisa tikatanga kutsvaga Linux zvine njere.
Ivo vanofanirwa kunetseka nezvekugadzira chishandiso pakukwirira kweMicrosoft Office, kana chimwe chinhu chakadai chiripo, nditende ini kuti makambani mazhinji angatama.
Ini ndinoda Ubuntu kane chiuru pamusoro peWindows asi ini ndinosarudza OSX chiuru pane Ubuntu neWindows pamwechete.
Osx ine akanakisa maturusi, iyo yakanakisa OS, yakakwenenzverwa, inoshanda zvakanyanya, inopa zvisingaite matambudziko, (kunze kweiyo yakajairika flash shit hongu) kune yangu OSX ndiyo OS yenguva yemberi.
Pindura ku dwmaquero
Ini ndinoda kuverenga nhau senge idzi, asi zvinokosheswa kana zvichiperekedzwa nezuva rekunyora
Pindura kune dabestgerbs